Government prepared to meet NCCT half way, says Aung Min
news Mizzima News, 06 May 2014 (7 years ago )
The Government is prepared to compromise on more than half of the remaining demands being made by the Nationwide Cease-fire Co-ordination Team, the vice-chairman of the Union Peace-Making Work Committee, U Aung Min, said on May 4. U Aung Min, who is alsoaMinister of the President’s Office, was ...
ကီၢ်ပယီၤပှၤဟးဝ့ၤဝီၤမၤတၢ်ဖိစှၤကိာ်ဂၤပတံထီၣ်ဝဲဖိးသဲစးလံာ်ဟးကီၢ်လၢတၢ်စူးကါညီနုၢ်အီၤ( regular passports)အံၤဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ
news Irrawaddy News, 03 May 2014 (7 years ago )
လွန်ခဲ့သောနှစ်လ၌ထိုင်းနိုင်ငံရှိရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများသည်၎င်းတို့၏ယာယီပတ်စပို့စ်များကိုထိုင်းနိုင်ငံအပြင်ဘက်နိုင်ငံတကာသို့သွားရောက်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ပတ်စပို့စ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန်ပြုလုပ်ရာတွင်အနည်းသာထိုသို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုသံရုံးရှိတာဝန်ရှိသူများမှပြောကြားခဲ့သည်။ လွန်...
news Eleven Media, 05 May 2014 (7 years ago )
ပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံာ်တံးဒီးကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့သုးမုၢ်ဒိၣ်(KIO)ကထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဖဲမၠံၣ်ကၠံနါဝ့ၢ်လၢကလံၤစိးဖဲလါမ့ၤ(၁၃)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. အီၣ်နဲၣ်အူလၢကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဝဲၤလီၢ်ခၢၣ်သးစံးဝဲ,“တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတၢ်ကမၤအီၤတသီ(မ့)ခံသီန့ၣ်လီၤ.ပှၤခံခီယၢ်ပၤအံၤသးလီၤပလိာ်လၢကထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲန့ၣ်လီၤ.” (KI...
news Kachin News, 14 May 2014 (7 years ago )
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်အပါအဝင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှအဆင့်မြင့်အရာရှိကိုယ်စားလှယ်များသည်ကချင်ပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်သောမြစ်ကြီးနားမြို့တွင်ယမန်နေ့ကမြန်မာအစိုးရဘက်မှ ၎င်းတို့နှင့်အဆင့်တူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူစေ့စပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုပညာရေးအဖွဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးဆန်လွတ်ဂွမ်မှဦးဆောင်ခဲ...
news THE NATION, 14 May 2014 (7 years ago )
news Eleven Media, 12 May 2014 (7 years ago )
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ခီထံခီကီၢ်ကရၢ(IOM)ကအိးထီၣ်ဝဲတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤပှၤဟးဝ့ၤဝီၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဝဲၤလီၢ်ခၢၣ်သးဖဲဝ့ၢ်တကူၣ်,မကွ့ဒီးမီၣ်လမၠဲၣ်ဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤဒ်သိး ကမၤစၢၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤလိဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အကါဒိၣ်တဖၣ်လၢပှၤဟးဝ့ၤဝီၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. (IOM)အခိၣ်ဒိၣ်ကတၢၢ်(Kieran Gorman Best)စံးဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကရၢကရိမၤ...
Master degree and post graduate diploma in Computer Science to be learnt online
news Eleven Myanmar, 19 May 2014 (7 years ago )
Yangon University has launched online programmes for graduate and post graduate studies leading to Master of Science in Computer Science (M.Sc) and Diploma in Computer Science (DCS). The programme is being offered at Computer Science Department under the university’s Centre for Human Resources Deve...
news Karen News, 22 May 2014 (7 years ago )